Xarun boliis oo laga furi doono xaafadda Rinkeby - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Talliyaha boliiska dalkan Dan Eliasson. sawir: Mona Ismail Jama/Sveriges Radio
Xarun boliis oo laga furi doono xaafadda Rinkeby
La daabacay tisdag 12 december 2017 kl 15.08
Maanta ayuu talliyaha boliiska qaranka Dan Eliasson dhagax dhigay goobta laga furi doono xafiiska cusub ee boliisku ku lahaan doono xaafada Rinkeby magaalada Stockholm.
Halkaas ayaa laguu meeleeynayaa ugu yaraan 240 boliis. Sido kale laga shaqaaleeysiinaya qaar ka mid ah ajaanibta xaafada agagaarka ku nool. Warsame Hussein oo imaam ka ah masjidka ku yaala xaafadan ayaa xafiiska cusub soo dhaweeynaya , waxaanu rajeeynayaa in goobta cusubi, amaanka xaafadan iyo kuwa kale ay ajaanibtu ku badanyihiin wax ku soo kordhiso.
Sidaan hore wararka idinla socodsiinay ayaa xaafada Rinkeby goor dhaweeyd lagu meeleeyay kameerooyin iyo mikrofoonayaal si looga hor tago rabshadaha iyo xabadeeynta halkaas ka taagna sanadyadii ugu dambeeyay. Talliyaha boliiska Dan Eliasson ayaa xafiiska cusub u arkaa mid wax ku soo kordhin doona dadka halkaas ku nool, dhinaca amaanka iyo caawimaada tusaalahan dalbashada basaboorka oo laga heli doono xafiiskan.
-Waxaan rajeenayaa in xafiiskani waxyaabo badan ku soo kordhiyo dadka Rinkeby ku nool, tusaale in ay amni iyo nabad dareemaan. Dhanka kale ayaan ka shaqaaleeysiinayna dad badan oo xaafadahan ku nool sida ay shaqadeena nooga caawiyaan, ayuu sheegay talliyaha boliiska Dan Eliasson.
Xafiiska cusub ee maanta la dhagax dhigay ayaa alababada loo furi doona dhamaadka sannadka 2019. In kasta oo la socodka amaanka xaafadan hadana lagu meeleeyn doono boqolaal boliis Warsame Hussein waxaa uu xafiiska cusub u arkaa mid muhiimad badan ugu fadhiyo doono ajaanibta Rinkeby.